OneUp: Mandefasa mandeha ho azy any amin'ny Google My Business avy amin'ny RSS Feed | Martech Zone
Raha orinasa eo an-toerana ianao, dia zava-dehibe ny fitazonana tranokala roa nohamarinina tsara ary koa ny Kaonty Google My Business. Ny ankamaroan'ny mpampiasa ny motera fikarohana dia tsy mba mihodina na mizotra amin'ny valin'ny zava-boahary mahita ny tranonkalanao… mifandray amin'ny fonosana sarintany eo amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana (SERP).
Ny fonosana map dia ny ampahan'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana izay misy ny sarintany sy ny lisitr'ireo orinasa manodidina ny toerana misy anao. Izy io dia mandray ny ankamaroan'ny SERP ary izy io no singa fampidirana voalohany ho an'ireo mpampiasa fikarohana hahitana fivarotana sy serivisy eto an-toerana.
Ny tsy takatry ny orinasa maro dia ny fonosana sarintany mifototra amin'ny kaonty Google My Business anao fotsiny, tsy ny tranonkalanao. Mba hitazomana ny laharana ambony sy ny fahitana amin'ny fonosan'ny sari-tany, ny kaonty ataonao dia tokony hotehirizina tsara miaraka amin'ny hevitra sy fanavaozana matetika sy vao haingana. Mora atao amin'ny azy ireo izany finday fampiharana… Saingy mbola mitaky anao hitantana sehatra hafa izany rehefa mivarotra ny varotrao eo an-toerana.
Ahoana ny fomba fanaovana syndicate amin'ny Google My Business
Ahoana raha mitazona tsara ny orinasanao WordPress tranonkala sy bilaogy tsy tapaka? Izany dia manome ny fotoana ahafahana mampihetsiketsika ny atiny amin'ny sehatra hafa, mamaky mpamaky, ary na dia ny fampiharana media sosialy mampiasa anao aza Syndication tena tsotra (RSS) mamelona.
Na dia ny famoahana sy ny fanatsarana ny atiny rehetra ho an'ny fantsona tsirairay aza dia afaka miteraka fihenam-bidy sy fifanakalozana valiny, ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy manana loharanom-pahalalana hanaovana an'izany. Eto no ilana indrindra ny mandeha ho azy - ary ny fandefasana ny atiny avy amin'ny sakafonao mankany amin'ny sehatra media sosialy dia vahaolana tonga lafatra. Ny ankamaroan'ny sehatra dia tsy manome an RSS amin'ny Google My Business safidy, na izany aza!
OneUp sy Google My Business
OneUp ahafahan'ny orinasa mandahatra sy mandeha ho azy ny lahatsoratry ny Google My Business. Ny sehatra dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa amina toerana iray na maromaro amin'ny fotoana iray, manampy sary, rohy ary bokotra Call-To-Action. Azonao atao koa ny mampakatra sary ao amin'ny fizaranao sary.
Ny OneUp dia tsy natao ho an'ny Google My Business ihany, fa io koa dia tafiditra ao amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, ary Pinterest. Anisan'izany ny:
Mitantana kaonty marobe miaraka amin'ny sokajy - Mamorona sokajy hanangonana kaonty miaraka, avy eo mandamina sy manivana lahatsoratra amin'ireo sokajy ireo.
Alimanaka media sosialy - Jereo ny topy maso ny lahatsoratra ho avy sy navoaka rehetra, amboary izy ireo, ary atsofohy-na-mitete hanova andro.
Canva Integration - Mamorona sary ao Canva tsy ilaozanao ny OneUp, ary asaivo ampidirina mivantana amin'ny lahatsoratranao.
Analytics - Jereo ny fanadihadiana lalina ary manaova tatitra isan-kerinandro na isam-bolana ho an'ny kaonty media sosialinao rehetra.
Generator Hashtag - Makà tolo-kevitra momba ny tenifototra mifandraika amin'ny teny lakile, ary ampio ho azy eo amin'ny paositrao na amin'ny hevitra voalohany (ho an'ny Instagram).
Sary an-tsary sy horonan-tsary marobe - Alaharo ireo sary misy sary marobe miaraka amin'ny sary 5 isaky ny lahatsoratra, ary koa lahatsoratra video.
Alaharo ny tantara Instagram - Drafitra sy fandaharam-potoana ny tantara Instagram, ary afaho amin'ny alàlan'ny fampandrenesana amin'ny finday.
Fampidinana marobe amin'ny paositra sosialy - Mampakatra sy mandahatra lahatsoratra marobe indray mandeha amin'ny alàlan'ny CSV, Google Drive, Dropbox, na avy amin'ny solosainao.
Facebook - Fandaharam-potoana amin'ny Facebook Profiles (amin'ny alàlan'ny fampandrenesana amin'ny finday), ary koa ny famoahana mivantana ireo pejy Facebook sy vondrona Facebook.
Atombohy ny fitsapana maimaimpoana anao mandritra ny 7 andro
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mpiara-miasa aho mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: ampidino betsaka ny orinasako googleSyndication Facebookfahanasyndication fahanagmbgoogle ny orinasakompanamboatra tenifototrainstagram storiesfikarohana eo an-toeranaseo eo an-toeranamandefasa amin'ny google ny orinasakorss feedfandaharam-potoana google ny orinasakofandaharam-potoana lahatsoratra media sosialykalandrie media sosialySyndication
Plausible: Safidy maivana sy tsy misy rindrina amin'ny Google Analytics